Alexander Elder ထံမှ အကြံပြုချက်များ: သင့်စိတ်ခံစားချက်ကို စိုးမိုးပါ
၁။ အရောင်းအဝယ်ကို ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ် မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့။ အရောင်းအဝယ်သည် ကစားပွဲမဟုတ်ပါ။ တကယ့်အကျိုးအမြတ်အောင်မြင်ချင်လျှင် အလေးအနက်ထားပါ။
၂။ စိတ်ခံစားချက်များသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဖြစ်စေတတ်သည့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ သင့်စိတ်ခံစားချက် ပေါက်ထွက်လာမှုအား လျှော့ချပြီး၊ ခေါင်းအေးအေးထားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၃။ အရောင်းအဝယ်ပေါ်ကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပါ၊ ငွေအပေါ်ကို အာရုံစိုက်မထားပါနဲ့။ သင့်အရောင်းအဝယ် အနေအထားပွင့်နေစဉ်အတွင်းမှာ ငွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ဆက်လက်သင်ယူပြီး၊ စမ်းသက်လေ့လာနေပါ။ သင့်ဗဟုသုတများတိုးလာပြီး လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ငွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ရလာပါလိမ့်မည်။
"အောင်မြင်သောရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး၏ ပန်းတိုင်မှာ၊ အကောင်းဆုံးသော အရောင်းအဝယ်များပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငွေသည် အဓိကမဟုတ်ပါ။" Alexander Elder
၁။ အကောင့်အတော်များများဟာ စိတ်ဖိစီးနေတဲ့ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဟာ သူရှုံးသွားတဲ့ငွေတွေကို ပြန်ကာမိအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ကြီးမားတဲ့အရှုံးနည်းနည်း (သို့) သေးငယ်တဲ့အရှုံးတွေ ဆက်တိုက်ကြီးကြုံရတတ်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို စီမံခန့်ခွဲသည့်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသည့်သူဟာ ယင်းကဲ့သို့စိတ်ဓာတ်ကျစရာအခြေအနေထဲရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၂။ ရောင်းဝယ်သူသည် အဆိုးထက် ကောင်းတဲ့အချက်ပြချက်များကိုသာ ထုတ်လုပ်ပေးမည့် ကောင်းမွန်သည့် အရောင်းအဝယ်စနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ၊ ထိုစနစ်သည် ရောင်းဝယ်သူအား ရေရှည်တွင်ကြီးပွားလာစေနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သည့်စနစ်တွင် အခြေခံသဘောတရားအနည်းငယ်သာရှိပါသည် (အညွှန်းကိန်းများများပေါင်းထည့်လေ၊ သင်မှားသွားနိုင်မည့် အန္တရာယ်ကြီးလေဖြစ်သည်)။
၃။ သင့်စနစ်အား မှတ်တမ်းဟောင်းအချက်အလက်တွင် စစ်ဆေးပြီးနောက်၊ တကယ်လုပ်နေတာဖြစ်ပေမယ့် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စမ်းသပ်မှုအောက်မှာပဲရှိတာ သေချာပါစေ။ မှတ်တမ်းဟာ မှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပြီး၊ ဈေးကွက်ကတော့ အမြဲပြောင်းလဲနေတာပါ။ သင့်အရောင်းအဝယ်စနစ် အလုပ်ဖြစ်တာ သေချာစေရန် ဒီမိုအကောင့် (သို့) တိုက်ရိုက်အကောင့်တွင် ငွေပမာဏနည်းနည်းနဲ့လေ့ကျင့်ပါ။
၄။ ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်းအဝယ်စနစ်ကနေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရောင်းအဝယ်စနစ်ဖြစ်အောင် မကြိုးစားပါနဲ့။ Leo Tolstoyက အမျှော်မြင်ရှိစွာပြုလုပ်ထားသည့်အတိုင်း "ပြည့်စုံမှုကို ရှာဖွေပါက၊ ဘယ်တော့မှ ရောင့်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး"။ ဘာပိုဦးမလဲ၊ သင့်မှာရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အရာကို ဖျက်စီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့၊ အသစ်လိုချင်ပါက၊ အလုပ်ဖြစ်ပြီးသား အရောင်းအဝယ်စနစ်ကို သွားမရှုပ်ထွေးစေပဲ၊ အခြားကိစ္စတစ်ခုမှာ ဥပမာ၊ ဒုတိယအရောင်းအဝယ်စနစ် ဖန်တီးတာမျိုးမှာ သင့်စွမ်းအားကို အသုံးချလိုက်ပါ။
၅။ သင့်အရောင်းအဝယ်အတွက် အထွက်မှတ်ရှာရန်၊ သင့်စိတ်ခံစားချက်ထက် နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများနှင့် တူရိယာ(ပစ္စည်းများ)ကို ကြည့်ပါ။
၆။ သင်အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ဖွင့်သည့်အခါ Stop Loss ထားပါ။ အချိန်နဲ့အမျှ Stop Lossကို ပြင်ပြင်သွားရန် အကြံပြုထားပြီး၊ ထိုသို့လုပ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းမှာ အရောင်းအဝယ်ဦးတည်ရာအတိုင်း ရွှေ့ရွှေ့သွားဖို့ (အဝယ် အရောင်းအဝယ်အတွက် အထက်နှင့် အရောင်း အရောင်းအဝယ်အတွက် အကျ) ဖြစ်သည်။ Stop Lossesကို ဘယ်တော့မှ မတိုးပါနဲ့။
၁။ သင်သည် ဈေးကွက်ထဲ၌ အမြဲနေနိုင်အောင် သေချာကြိုးစားပါ။ အရောင်းဝယ်တစ်ခု ဆုံးရှုံး ခြင်သည် သင်ကို အလုပ်လက်မဲ့ မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဆက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ သင့်၏ အရောင်းဝယ်တစ်ခုချင်စီ ကနေ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လောက်စွန့်စားနေတာလဲဆိုတာ သင်သေချာ သိထားပါ။ သင့်လစဉ် ဆုံးရှုံးမှုသည် ၈ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုများနေပါက၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်ကို ခေတ္တရပ်ထားပြီး၊ အရောင်းအဝယ်စနစ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ သင့်ကို Stop Losses ရှိစေမည့် အရောင်းအဝယ်များကိုသာရွေးချယ်ပါ။
၂။ သင်အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားမူအများကြီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သင်၏ စရံငွေကို အရောင်းအဝယ်များစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ အရောင်းဝယ်မျိုးစုံ၏ သဘောတရားကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ခွဲခြားထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ အရောင်းဝယ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အရွယ်စားကို သင်၏ ရှယ်ရာ ၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါ။ Elder က ဒီလို နည်လမ်း ကို "ဖြည်းဖြည်းချင်း သူဌေးဖြစ်လာခြင်း" ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ သူက "ပုံမှန်အမြတ်နှင့် အသေးစား ငွေလျော့နည်းလာမှုများဖြင့် အကောင်းဆုံး ခြေရာကောက်နိုင်မည့် မှတ်တမ်းထူထောင်နိုင်ရန် ရောင်းဝယ်ပါ "ဟုပြောသည်။
" အပျော်တမ်းသမားကတော့ အရက်သမား အရက်သောက်သလိုမျိုး အရောင်းအဝယ်ပေါ် တူညီတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ အချိန်ကောင်းပိုင်ဆိုင်သလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ကိုယ်သူဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်သလိုပါပဲ။" Alexander Elder
၃။ ရောင်းဝယ်သူသည် ရှိပြီးသား အရောင်းဝယ်အနေအထားမှာ ထပ်ထည့်လို့ရပါသလား? ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည် break-even (အမြတ်အစွန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အချိုးတူနေသည့်)အဆင့်မှာ ဈေးလမ်းကြောင်း-နောက်လိုက်သည့်အနေအထား (သို့) အမြတ်ရပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ နောက်ထပ်အနေအထားရှိ အန္တရာယ်သည် သင့်ရှယ်ရာ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ထက်မကျော်ပါက ထပ်ထည့်လို့ရပါသည်။
ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးနယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ရောင်းဝယ်သူများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် သီးသန့်ရောင်းဝယ်သူများထက် ဘာလို့ပိုအောင်မြင်လဲ သင်သိပါသလား? ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ကန့်သတ်ထားတာထက်ပိုရှုံးပါက သူတို့အလုပ်ဖြုတ်ခံရမည်ဆိုတာ သိလို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ သူတို့သည် ပိုဂရုထားတတ်ပြီး၊ ဆုံးရှုံးမှုများကို ကန့်သတ်ကြသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘော့စ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင့်ကိုယ်သင် တိကျတင်းကျပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့၊ သင့်အရှုံးများကို အထိန်းအကွပ်မဲ့တိုးသွားခွင့်မပြုပါနဲ့။
သင်အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်အလုပ်မပြီးသွားဘူးဆိုတာ သတိပြုပါ။ ငွေအလွှဲအပြောင်းတစ်ခုစီတိုင်းကို သုံးသပ်ရပ်အားစိုက်ထုတ်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်မေးခွန်းများများမေးပါ။ ဘာက ကောင်း/ဆိုးသွားခဲ့လဲ? သင်လုပ်သင့်တာ အကုန်လုပ်ခဲ့သလား? အကောင်းဆုံးအဆင့်များတွင် Take Profit နှင့် Stop Loss ထားခဲ့ပါသလား? သင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသည် သင့်အကောင်းဆုံးအချက်အလက် အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ပညာရှိ Alexander Elderအရ၊ ရောင်းဝယ်သူများ၏ အဓိကရန်သူများမှာ လစ်လျူရှုခြင်းနှင့် စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် အားကောင်းသောရန်သူများဖြစ်သော်လည်း သင်ဘာကိုတိုက်ထုတ်ရမည်ဆိုတာကို သိပါက သင်အနိုင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ လုံ့လဝီရိယရှိသူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ အမြဲတမ်း ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်နှင့် အရောင်းအဝယ်အကြောင်း ပိုမိုပြီး လေ့လာနေသင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ မုဆိုးတစ်ဦးကဲ့သို့ စိတ်ရှည်ခြင်းကို ဖွံ့ဖြိုးလာစေပြီး၊ သာလွန်သောအရောင်းအဝယ် အခွင့်အရေးများ သူတို့ဘာသာပေါ်လာသည်အထိ စောင့်ဆိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပညာရေး အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်မှုများ